Mpanavakava-pananahana nalaina sary iray izay miady amin'ny tsy fitovian'ny miralenta | Famoronana an-tserasera
Mpanavakava-pananahana nalaina sary iray izay miady amin'ny tsy fitovian'ny miralenta
Paul gondar | | mpanakanto, Inspiration
Fitiavana vehivavy an-tsary ipolisera miady amin'ny tsy fitovian'ny miralenta izany dia hahatonga antsika hahita zavatra avy fomba fijery hafa mahatonga antsika hanokatra ny masontsika amin'ny fiarahamonina izay tsy mitovy amin'ny toa azy. Andro vitsivitsy lasa izay dia nihaona tamin'ny Andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy, fivoriana izay nidina an-dalambe olona an-tapitrisany hanehoana ny fitarainany sy ny tsy fitovian-kevitra momba ny ny tsy fitoviana ara-tsosialyHitanay ny rohy marobe momba ny mpamorona vehivavy malaza, ny mpahay siansa ary ny rantsana hafa, fa ahoana kosa ireo mpanakanto vehivavy ankehitriny izay mampiseho izany tolona izany isan'andro? ny marina dia betsaka ny mpanakanto ao anaty tambajotra, amin'ity lahatsoratra hasehontsika ny iray amin'izy ireo.
Sarina teny arivo ny sary Izany no zavatra hazava amintsika, raha te hilaza zavatra tsara kokoa isika dia lazao izany amin'ny maso ary raha ataontsika amin'ny vazivazy dia tsara kokoa ny miteraka fiatraikany lehibe kokoa amin'ny olona.
Ao amin'ny tambajotra dia afaka mahita isika mpanakanto maro karazana, avy amin'ireo mpanakanto manana laharam-piasa mifantoka mampiseho tsy fitoviana izay misy eo amin'ny fiaraha-monina mifandraika amin'ny lahy sy ny vavy, eny fa na ireo mpanakanto miasa aza dia tsy misy ifandraisany amin'ny resaka vehivavy fa mbola mpanakanto vehivavy. Ao anatin'ny andiany iray an'ny lahatsoratra handeha isika ataovy hita kely ny vehivavy amin'ny maha mpamorona azy Eo amin'ny tontolon'ny zavakanto dia hiezaka izahay hitady vehivavy mpamorona anio. Mamporisika ny mpamaky izahay manampy mpanakanto amin'ny fanehoan-kevitra handefasana azy ireo any aoriana.
Feminista misy sary ao amin'ny tetikasa notontosain'ny vehivavy roa Andalusians: Maria Murnau sy Helen Sotillo, ny asan'izy ireo dia mifantoka amin'ny fanaovana ataovy hita maso ny machismo amin'ny alàlan'ny sary an-tsary ny karazana toe-javatra isan'andro.
Taratra ny asany tsy fitoviana eo amin'ny lahy sy ny vavy miaraka amina vazivazy indraindray manintona ny mpanaraka azy rehetra. Imbetsaka izy no mitady handrava ireo hevitra macho ireo momba ny andraikitry ny vehivavy izay misy ifandraisany amin'ny zavatra faharoa, amin'ny sary etsy ambony dia afaka mahita ny fombaManohitra ny hevitry ny andriambavy marefo ary manova azy ho mahery sy matanjaka Jedi.
Su fitsidihana matihaninaNanomboka tao amin'ny University of Seville izy izay nanatontosa tetikasa projovisual, sary ary tetikasa mifandraika amin'ny fikarohana vehivavy. Nahavita ny mari-pahaizana Master momba ny miralenta, ny mombamomba ary ny zom-pirenena avy amin'ny Oniversiten'i Cádiz.
Ny tetikasa lehibe an'ny Illustrated Feminist dia teraka tamin'ny Novambra 2015 avy amin'ny tanan'i Maria Murnau sy Helen Sotillo. Ity tetik'asa ity dia mifantoka amin'ny fampisehoana ireo rehetra ireo toe-javatra isan'andro macho amin'ny fomba mahasarika maso ary miaraka amin'ny hatsikana. Niasa tamina andrim-panjakana samihafa izy satria heveriny fa tokony ho izany no tetikasany misokatra ho an'izao tontolo izao.
Vao haingana aho no nanolotra a asa fanontana toerana ahafahanay mihaona tonga hatraiza ny patriarika ary amin'ny fomba ahoana no ahalalantsika an'izany amin'ny toe-javatra isan'andro. Mahaliana ity tetikasa ity satria hita taratra amin'ny toe-javatra nisy izany rehetra izany afaka mahatsapa ho fantatra isika amin'ny fotoana sasany amin'ny fiainantsika. Amin'ny ambaratonga sary dia asa tena madio Amin'ny endrika madio indrindra an'ny Feministe Illustrated.
Afaka mahita be dia be isika ao amin'ny tranonkalany fampahalalana mahaliana momba ny vehivavy, zavatra tena mahaliana dia ny voambolana momba ireo hevitra tena ilaina mba hahafahana mandinika bebe kokoa an'ity tontolo ity.
Ny sasany amin'izy ireo dia:
Androcentrism: Fandaminana an'izao tontolo izao, ireo rafitra ara-toekarena sy sosialy-kolontsaina, miorina amin'ny endrik'olombelona. Ity tontolo ity dia heverina amin'ny ankapobeny ho "masculine."
Banga amin'ny lahy sy ny vavy: Ny fahasamihafana be dia be hita teo amin'ny vehivavy sy ny lehilahy amin'ny sanda, ny fihetsika ary ny fiovaovan'ny fahazoana loharanon-karena, ny tombony azo amin'ny famokarana, ny fanabeazana, ny fandraisana anjara politika, ny fidirana amin'ny fahefana ary ny fanapaha-kevitra.
mpiara-fanabeazana: fomba fanabeazana misy manabe nefa tsy mametraka fifandraisana manjaka manomboka amin'ny firaisana amin'ny iray hafa. Miorina amin'ny fitovian'ny lahy sy ny vavy sy ny tsy fanavakavahana.
Efa mahalala bebe kokoa momba ny iray isika mpanakanto mpiady mahery izay mitady fitoviana amin'ny alàlan'ny kanto. Hiakatra tsikelikely isika lahatsoratra momba ireo matihanina rehetra izay hitantsika ankehitriny miparitaka erak'izao tontolo izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Mpanavakava-pananahana nalaina sary iray izay miady amin'ny tsy fitovian'ny miralenta
Fisafidianana ny mockup amin'ny karatra orinasa tonga lafatra ho an'ny tetikasanao
Adidas dia namoaka fanontana manokana miaraka amin'ny emotikon sy fomba maro